प्र्यांक गर्न गएका यी युवाको भयो रामधुलाई, प्र्यांक गरेकाे भन्दा पनि छाडेनन् ( भिडियाेमा हेर्नुहाेस् ) – Khoj Dainik
प्र्यांक गर्न गएका यी युवाको भयो रामधुलाई, प्र्यांक गरेकाे भन्दा पनि छाडेनन् ( भिडियाेमा हेर्नुहाेस् )
March 9, 2021 adminLeaveaComment on प्र्यांक गर्न गएका यी युवाको भयो रामधुलाई, प्र्यांक गरेकाे भन्दा पनि छाडेनन् ( भिडियाेमा हेर्नुहाेस् )
प्र्यांक गर्न गएका यी युवाको भयो रामधुलाई, प्र्यांक गरेकाे भन्दा पनि छाडेनन् ( भिडियाेमा हेर्नुहाेस् ) । मृ-तुन्जय अघोरी बाबा अहिले विभिन्न सामाजिक संजाल लगायत सोसल मिडियामा भाइरल भैरहेको बेला फेरी मोरंगमा १ जना जंगी बाबा नाम गरेका बाबा देखा परेका छन् । आफ्नो नाम जंगी बाबा बताउने बाबा २५ बर्षको उमेर बाट घर छोडेको बताएका छन् ।।
अघोर बाबाको जस्तै उनि पनि बोल्नमा धेरै खुलेर बोल्ने बाबा रहेछन् । उनले खुलेर आफ्नो प्रेम र से, क्सको बारेमा आफ्नो बिचार राखेका छन् । मोरंगको उर्लाबारीमा उनि अहिले बस्दै आएका छन् । अघोर बाबाको बारेमा र बम्जनको बारेमा उनले खुलेर आफ्नो विचार राखेका छन् । बाबा धेरै प्रकारका भए पनि बाबाको कर्म गर्ने कम छन् भन्दै उनले आफु योग सम्बन्धि राम्रो बाबा भन्दै दाबि गरेका छन् ।।
उनि मोरंगको उर्लाबारीमा भर्खरै आएर बसेको बताएका छन् । जंगी बाबालाइ लामो समय पछि हामी भेट्न जाँदा प्र्यांक गर्ने योजना गरेका थियौ । प्र्यांक गर्नलाइ साथी आइन्द्र गएपछि अचानक जंगी बाबाको आक्रोशमा आउनु भएकाे थियाे । हेर्नुहाेस् अरु के-के भयाे त तलकाे भिडियाेमा:-
भोक’का का’रण कं’काल’जस्तै भ’इसकेका ७ वर्षका एक बालकको भ’या’व’ह तस्वीर सार्वजनिक भएको छ । यमनका यी बालकको नाम फैयद समीम हो । प्यारालाइसिस र ग’म्भीर कुपोषण’को शि’कार भएका समीम’को तौल केवल ७ किलो छ । ***भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला***
समाचार एजेन्सी रोयटर्सका अनुसार समीमको हा’लत नि’कै ग’म्भीर भ’इसकेको थि’यो र मुस्किल’ले उन’को ज्या’न ब’चाउन स’कियो । अहिले उनलाई यमनको राजधानी साना ल्याइएको छ जहाँ एक अस्पतालमा उनको उपचार भइरहेको छ । ***भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोस***
अल शबीन अस्पताल’को कु’पोषण वार्डका सुपरभाइजर डा. रागेह मोहम्मदका अनुसार समीमलाई अस्पताल ल्याउँदा उन’को ज्या’न जा’नै लागे’को थि’यो ।समयमै सही निर्णय गरेर उन’लाई ब’चाउन सकिएको बताउँदै डा. मोहम्मदले अब उनको स्थिति सुधार भइरहेको बताए । डाक्टरका अनुसार समीम सेरब्रल पल्जी र ग’म्भीर कु’पोषण’का शि’का’र छ’न् । राजधानी सानाको अस्पताल ल्याउनका लागि समीमलाई लिएर १७० किलोमिटर भत्किएको जीर्ण बाटो यात्रा गर्नुपरेको थियो ।
समीमको उपचारको लागि उनको परिवारसँग पैसा पनि छैन । उनको परिवार उपचारको लागि दान’मा नि’र्भर छ ।स्थानीय अस्पतालका डाक्टरले देशमा कु’पोषित बालबालिकाको संख्या बढिरहेको बताए । संयुक्त राष्ट्रसंघले यमनले विश्व’कै ठूलो मा’नवी’य संकट’को साम’ना गरिरहेको बताएको छ । ***भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोस*
‘हामी ओ’छ्यानमा तीनै जना सँ’गै सु’त्छौँ’ हामीलाई कुनै स’मस्या छैन’
सवारीको ठक्करबाट चितुवा मर्यो भिडियो हेर्नुहोस।
आ`त्म`हत्या गर्दैछु ,म एउटि सपना म`रेर केही हुदैन हजार सपना बा`च्नुपर्छ (भिडियो हेर्नुस्)
जे बर मागे पनि पुग्ने, यो कस्तो अनौठो शक्ति! एकपटक पुग्नै पर्ने दर्शनको लागी! पुग्न न सके एक शेयर अबश्य गर्नु होला !